TTSweet: အန်တီဆွိ update
Posted by T T Sweet at 1:57 PM
တောင်ငူသား December 14, 2011 at 3:06 PM
ပန်းတွေလှတယ်။ ယုဇနပန်း အခုမှ သေချာ မှတ်ရ၏။
ငါးခူတစ်ကီလိုလောက်တော့ လိုချင်သား :P တောင်ငူ မုန့်ဟင်းခါး ဟင်းရည်ကျဲ ချက်စားမလို့။
ခရမ်းသီးတော့ လုံးဝမကြိုက်။ ထောပတ်သီး အင်မတန်ကြိုက်သော်လည်း အလုံးသေးပြီး ဈေးကြီးသဖြင့် မြန်မာပြန်တုန်းသာ အဝသောက်၏။
စန္ဒယားလေး စိတ်ဝင်စားသော်လည်း အားပါးတရ ရိုက်နှက်ရသော ဒရမ်ကိုသာ နာနာတီးချင်မိ၏။
Thandar Lwin December 14, 2011 at 4:26 PM
ဘ၀ အကျိုးပေး အလွန် အင်မတန် ကောင်းသော အမဆွိ......း))
ဂျူဂျူလေး လှချင်နေပြီ ဆို လို့ သဘောကျ ပြုံးမိတယ်။
rose of sharon December 14, 2011 at 4:29 PM
အဲဒီဆံပင်ပုံလေးကြိုက်တယ်... ဘယ်တော့မှမရိုးတဲ့ဒီဇိုင်းလေး... ဂျူဂျူလေးကချစ်ဖို့ကောင်းတယ်... ချဉ်ပေါင်ကို ပုဇွန်နဲ့ကြော်တာအရမ်းကြိုက်... ယုဇနပန်းလဲကြိုက်တယ်... အနံ့လေးကသိပ်မွှေးတာ...း)
Vista December 14, 2011 at 4:45 PM
T sweet ကိုမျှော်နေတာကြာလှပီ။ ဝက်သားတုတ်ထိုးချက်နည်းရှာရင်း T sweet blog ကိုစကြိုက်တာ :)
ဗစ်စတာ ပြောသလိုပဲ copy လိုက်မယ် ဖတ်ရတာ စိတ်ချမ်းသာတယ်
Sorry to hear that Ju Ju got cold & sick. She looks slim down.
မြသွေးနီ December 14, 2011 at 5:50 PM
အို...စုံချက်ကတော့...။ မဖတ်ရတာ ကြာနေတော့ အားပါးတရကြီးကို ဖတ်သွားတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ငါးခူရတာ မိုက်တာပေါ့..။ ဒီနေ့လည်း မြသွေးတောင် ငါးခူကြော်ချက်လေးချက်လာသေးတယ်။ ပီယာနိုကြီးသဘောကျတယ်။ သားပြည့်ကို လာမယ့်နွေရာသီ သင်ခိုင်းမလားလို့...။
ဂျူဂျူလေး တော်တော် ပိန်သွားတယ်။
စိတ်ကြီးတယ်...ဒီညနေ sasa မှာ သွားရှာမယ် :)
နောက်လည်း ကြုံတဲ့အခါ skincare လေးတွေ ညွှန်းပေးပါလို့ ...
ကျေးကျေးစ် အမ ...
T T Sweet ကိုမျှော်နေတာ.. ရေးသာရေးပါ ဘာရေးရေး အားပေးနေမှာပါ.
အေးလေ တီဆွိကလဲ ..တခါလာကြည်.လိုက်တိုင်း နီညိုကနေ မတက်သေး၊ နောက်တရက်လာကြည်.လဲ နီညိုနဲ.ဘဲတွေ.နေလို.စိတ်လေနေတာ။
မောင်သီဟ December 15, 2011 at 12:00 AM
ငါးခူချွဲကျိနေရင်တော့ မျက်ကျည်းသီးအချဉ်ရည်လေးနဲ့ဆေးပေးဗျာ့ (ဆြာလုပ်ဌာ)
akmoe December 15, 2011 at 12:38 AM
မင်္ဂလာပါ .. မဆွီတီရေ ..
မဖတ်ရတာကြာနေလို့အရမ်းကောင်းပါတယ်ခင်ဗျ .... :)
ဟုတ်ပ တီဆွိရယ် . တရက်တရက်ဝင်ကြည့်လိုက်.မတွေ့လိုက်နဲ့ နေမှကောင်းရဲ့လား. အလုပ်ရှုပ်နေလားလို့. အပေါ်ကပြောကြတဲ့အတိုင်းဖတ်ရတာစိတ်ချမ်းသာပြီး အများကြီးဆိုတော့အားရလို့ ကျေးဇူးပဲနော်..
သက်ဝေ December 15, 2011 at 2:33 AM
တဝကြီး ဖတ်လိုက်ရလို့ကျေနပ်သွားတယ်
လှပြီးသား ကိုယ့်သူငယ်ချင်းက ဘယ်လို ဆံပင်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် လှနေတာပါပဲလေ... :-)
ပိုစ့်အသစ်လေးတင်ထားလို့ ၀မ်းသာသွားတယ်။ ဂျူဂျူလေး ပိုလှလာတယ်ဗျ။ ချဉ်ပေါင်နဲ့ ပုစွန်ကြော်ကတော့ မခံစားနိုင်ဘူးဗျာ။
susu December 15, 2011 at 3:09 AM
ပုစွန်ကို အထုပ်ထက် အသေးလေးတွေကို ပိုကြိုက်တယ်။ စလုံးမှာ ရှားပြီး ဈေးများတယ်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 15, 2011 at 2:34 PM
အစ်မဆွိတို့ စာရေးလိုက်ရင် ဖတ်တဲ့သူကို ပြုံးအောင် ရေးနိုင်တာ အဲဒါ အားကျတာ..
အဲဒီထဲက Facial လေး မျက်နှာတင်းရင်းတယ်ဆိုလို့ သဘောကျသွားတယ်. ထောပတ်သီးတော့ ဒီမှာလည်း သိပ်ပေါနေပြီ။ မျက်နှာလိမ်းတာလည်းကောင်းတာပါဘဲ..
မုန့်ဟင်းခါးအိုးမမြင်လိုက်ရလို့တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်. :P
တီဆွိ ညွှန်းလို့ sasa က သွားဝယ်လိုက်ပြီ။ Fluid active + cleanser ရယ်မှ S$19.90 ပဲကျတယ်။
Sweep the debt to read.This post is really flavour full.Ju Juu looks slim down and sorry to know that.I'll look for fluid active here.Sometimes it's famous out of country and can't find it here.Thanks for everything you shared.
အန်တီကေ December 16, 2011 at 1:13 AM
အန်တီကြီးက..အလန်းကြီး ရှိသေးတယ်။ မျက်ခုံးမွေး သေးသေးသွယ်သွယ်လေး ရယ်..း)
ဟုတ်တယ် တီဆွိ..အခု sale ချထားလို့တဲ့ Fluid active + cleanser ကို S$19.90 ဘဲပေးရတယ်။ ပုံမှန်ဆို Fluid active တမျိုးတည်းကိုတောင် S$ 21.90 တဲ့ .. ဆိုင်ကပြောတယ်...
တီဆွိ ညွှန်းပေးတာ ပစ္စည်းကောင်းရုံတင်မဟုတ် အချိန်ကောင်းရောဘဲ..
အခု Fluid active စသုံးကြည့်နေပြီ...ပြောပါတယ် စိတ်ကြီးပါတယ်လို့ :P
(Anonymous ...December 14, 2011 5:54 PM )